Ukubaluleka koyilo kwivenkile ekwi-Intanethi, njengeMercadona | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJuan Roid uyavuma oko Iwebhusayithi yeMercadona "Iyanya" kwaye iqinisekisa utshintsho olubalulekileyo lowama-2018.
"Indawo yakho yewebhu ikukaka", Ubukhulu becala ibiziingxelo zabathengi kwaye yinto eyothusa abantu abaninzi, nguJuan Roig, umongameli waseMercadona, ungqinile kule ntetho kube kanye wahlangabezana nokuthenga kwi-Intanethi Kwelo phepha. Akuthathi mzamo omkhulu ukufikelela kwesi sigqibo kwaye kwanele ukungena kwiwebhusayithi yakho kwaye siya kuyiphawula kwangoko uyilo lwayo, olungaphenduliyo kwaphela kuyilo lokwenyani ekufuneka lolu hlobo lwewebhusayithi lube nalo. Yongezwe koku, sikwanayo ukuqhubela phambili kophuhliso lwewebhusayithi, ezingayeki ukubonisa uyilo olunzulu ngokupheleleyo.
1 Kutheni le nto uyilo lwewebhusayithi lubaluleke kangaka?
2 Luhlobo luni loyilo olufunwa nguMercadona kwi-Intanethi?
Kutheni le nto uyilo lwewebhusayithi lubaluleke kangaka?
Umongameli wale khonkco iivenkile ezinkulu ezikwi-Intanethi uthembise ukuba angatshintsha le webhusayithi ngo-2018, esebenzisa isicwangciso esisebenzayo se-intanethi, kunye noyilo oluthile olukhoyo kujongano lwenkqubo esele ichaziwe. "Iya kuba ngendlela eyahlukileyo kwaye siya kothuka", Uvakalise umongameli wale webhusayithi ngokunxulumene nolu tshintsho, ukuze kamva aqinisekise ukuba kwimeko apho ukuthengwa kwi-Intanethi akuqhubeki nokuba nenzuzo, baya kuthatha isigqibo sokungayiqali.
URoig ukuqinisekisile konke oku ngaphakathi kongenelelo lwakhe ekunikezelweni kweziphumo zewebhu kwi2016, apho wabhengeza khona iphepha elilandelayo liyahamba. Ngokunjalo, baqinisekisile ukuba bazakuzinciphisa izibonelelo abazifumanayo kwiphepha ngesinye kwisithathu, ukusuka malunga ne-636 yezigidi ukuya kwi-200 yezigidi kwiminyaka emi-2 ezayo.
Luhlobo luni loyilo olufunwa nguMercadona kwi-Intanethi?
Ngokusisiseko, enye yeengxaki ezingumfuziselo esinokuzifumana kwiwebhusayithi ye-mercadona sisiciko sayo kwaye kukuba abasebenzisi abaninzi bayangqina ukuba uyilo lwayo "Ukufumana enye kwi-90s”. Njengokuba bathetha ngemibala yabo kunye neemilo, njengoko zilula kakhulu kwaye zinomda, umbuzo ongabonwayo kumaphepha anamhlanje ngenxa yendlela elula esinokuhlela ngayo uyilo lwewebhu.
Kukho iingxaki malunga nomsebenzi ophakathi kwayo onokuthi enze izenzo zawo kwiwebhu, kunye nefayile ye- Inkuthazo yokuthengwa ngabathengi, kuba kubonakala ngathi ezi zinxibe kakhulu.
El MUSA ukubonisa imifanekiso yeemveliso ezithengiweyo sesinye sezikhalazo eziphambili ezifunyenwe yile webhusayithi.
Kuninzi kulindeleke kuhlobo oluphuculweyo lwale webhusayithi, ngenxa yesi sizathu, ulindelo ekugqibeleni luyonyuka, enkosi kwinto yokuba, nangona kukho ukusilela kunye neempazamo, uninzi lwabantu lusabheja kule venkile ikwi-intanethi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukubaluleka koyilo kwivenkile ekwi-intanethi
Ukuqaliswa kwenguqulelo yeSpanish yomhleli weCanva